किन डराउने भगवानसँग ? « Janata Samachar
किन डराउने भगवानसँग ?
प्रकाशित मिति :5August, 2019 3:08 pm
महिलाले दिनभर सिस्नु टिप्थे । पुरुषले माछा मारेर ल्याउँथे । अर्कातिर तिनले माछा पनि खान नमिल्ने, सिस्नु पनि खान नमिल्ने रहेछ
पूरा पाषाणकालको मानव यही एक डरका कारण कालान्तरमा मानिस आफ्नो कैयौँ कल्पना भगवान, आत्मा, परलोक, स्वर्ग–नर्क, देवीदेवतालाई जन्म दिन्छन् । खासमा यो आफैँलाई मृत्युपछि पनि जीवित अस्तित्व रहोस् भन्ने चाहनाका साथ दिइन्छ । यी सब कल्पना हुन् । जुन मानिसले जन्मजात बुद्धिले मृत्युको डरलाई बेवास्ता गर्न प्रयोग ग¥यो । विस्तारै यी सबै कुरा विभिन्न रीतिथिति र अन्धविश्वासमा रूपान्तरण हुँदै गए । जसका कारण यस्ता रीतिथिति र अन्धविश्वासले बिस्तारै व्यवसायको रूप लियो । हरेकलाई जानकारी भएको पाटो हो । आज विभिन्न नाम दिएर जन्माइएका सयौँ धर्मका रूपमा अज्ञानको समान पेशा हाम्रो अगाडि छ । यही कारण आज पनि धर्म संसारका ठूला व्यवसायमध्ये प्रमुख पेशा बनिरहेको छ । यसका हतियार यसैगरी औषधि र हतियार अर्का दुई ठूला पेशा हुन् ।
जीवनको सत्य हो, धर्मको दरबार यो बुझ्नेबित्तिकै कार्ड जस्तै झर्नेछ, किनभने यो आत्मा हो कि परमात्मा र यी दुवै धर्मको आधार हो, जहाँ आत्मा मर्दछ र दिव्य मर्नेछ
एकपटक सोच्नुहोस्, हामी कुकुरदेखि डराउँछौँ, बाघ र सिंहसँग डराउँछौं, भेडासँग डराउँछौं, सर्पसँग डराउँछौँ, बिच्छीसँग डराउँछौ । किनकी यी सबैका कारण अन्धकारले डराउँछ, तर हामी किन भगवान–परमेश्वरसँग डराउँछौँ ? डरले हाम्रो विजय हराउँदै गएको छ । हामी मावनतादेखि नै कमजोर बन्दै गएका छौँ । डर त्याग्नुपर्छ । अनि मात्र मानवताको विजय हुन्छ ।
आरक्षणमाथि नै आक्रमण